Arahabaina ianao tonga soa eto amin'ity tranokala ity. Tranokala natao indrindra hirakitra ny tononkiran'ireo mpanakanto malagasy ary hizara izany ho an'ny malagasy sy ny mpankafy rehetra. Hira maro be no hoezahana atolotra anao ato manomboka amin'ny ela ka hatramin'ny vao haingana indrindra. Mirary fitsidihana soa ho anao ary.
Tononkira 20 voaray farany